नेपालका १० धनाढ्य व्यक्ति, कस्को सम्पत्ति कति ? (सूचिसहित) – Sadak Media
नेपालका १० धनाढ्य व्यक्ति, कस्को सम्पत्ति कति ? (सूचिसहित)
काठमाडौं,१ माघ, २०७४: नेपाली मात्र हैन विश्वको हरेक समाजमा कुनै पनि व्यक्तिको सामाजिक हैसियत र उचार्इ मापनको कारक तत्वका रूपमा धनले आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएको छ ।
कोही धनढ्य परिवारमा नै जन्मेर धनी बनेका छन् त कोहि आफ्नो मेहनतका कारण धनी भएका छन्
१ विनाेद चौधरी
३. उपेन्द्र महत
विधुतिय सामाग्रीको व्यापारबाट व्यापार सुरू गरेका उप्रन्द्र महतो भोरोनेजमा रहेको टिभि कम्पनीका मालिक हुन् । उनको कम्पनीले वार्षीक १० लाखवटा टिभीहरू उत्पादन गर्दछ । हाल उनले विधुतीय सामाग्री मात्र नभएर तेल,बैंक र अटोमोवाइलका क्षेत्रमा पनि हात हालेका छन् । उनको कुल सम्पति ३६ करोड देखि १ अर्ब डलरको हाराहारीमा रहेको छ ।
हेटौडामा जन्मीएका अजय सुमार्गी मुक्ति श्री प्रालीको अध्यक्ष हुन् र पछिल्लो समयमा उनी पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड सँगको राजनीतिक सम्बन्धका कारण पनि चर्चामा छन् । कतिपयका अनुसार प्रचण्ड स्वयम्को कारोबार सुमार्गीले गर्दछन् । उनको कुल सम्पति २० करोड डलर रहेको छ ।
अन्तराष्ट्रिय जगतमै दुखद खबर, सयौ यात्रु बोकेको विमान यसरि चिप्लियो (भिडियो सहित)
प्रचण्डकाे निधारमा थुक्ने दिन नअावस् : अाङकाजी